အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုစာဖတ်ခြင်းဖြင့်မြှင့်တင်ပါ — Steemit
aungtharkyaw (50)in #myanmar •2years ago (edited)
ဇာတ်ကောင် ဇာတ်ဆောင် ဇာတ်လမ်းတို့အပေါ်
စာဖတ်ပရိသတ်များ တသသ စွဲလမ်းအမှတ်ရနေစေမှု ခေတ်အချိန်အခါနှင့်ထင်ဟပ်ကာ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တို့ဖြင့် ထုံမွှမ်းဖွဲ့နွဲ့မှုကြောင့် အလေးအနက်ထားခံရမှုအပေါ် အခြေခံ၍
မြန်မာဝတ္တုရှည် ၁၀၀ ကိုရွေးချယ်တင်ပြလိုက်တာကို
ဂျိမ်းစ်လှကျော် - မောင်ရင်မောင် မမယ်မ
ရွှေဥဒေါင်း - ရတနာပုံ
ပီမိုးနင်း - နေညိုညို
ပီမိုးနင်း - နေရီရီ
လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီး - တပင်ရွှေထီး
( 16 . 11 MB ) #စာမျက်နှာ - ၁၅၀
( 18 . 50 MB ) #စာမျက်နှာ - ၁၅၀
တပင်ရွှေထီးဝတ္ထုတော်ကြီး အပိုင်း ( ၃ )
( 18 . 84 MB ) #စာမျက်နှာ - ၁၅၀
တပင်ရွှေထီးဝတ္ထုတော်ကြီး အပိုင်း ( ၄ )
( 27 . 50 MB ) #စာမျက်နှာ - ၂၂၀
ဇဝန - ကောလိပ်ကျောင်းသား
သခင်ဘသောင်း - ပန်းသာမစာအု
သိန်းဖေမြင့် - တက်ခေတ်နတ်ဆိုး
ရွှေလင်းယုန် - သူ
ဒဂုန်တာရာ - မေ
ဦးနု(ခ)သခင်နု - ရက်စက်ပါပေ့ကွယ်
မင်းဆွေ - ဓါး
မောင်ထင် - ငဘ
တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ် - နန္ဒာပုလဲ
ဒဂုန်ခင်ခင်လေး - စာဆိုတော်
နန္ဒ - သံနှင့်သွေး
တင့်တယ် - ကမ္မဖလ
သော်တာဆွေ - ဘွန္တောကြက်သူခိုး
သာဓု - အတာ
နတ်နွယ် - အပြာနှင့်အဝါ
အောင်လင်း - အရိုင်းစံပယ်
ခင်ဆွေဦး - တို့တိုင်းဌာနီ
ရန်ကုန်ဘဆွေ - သေသော်မှတည့် သြော်ကောင်း၏
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - သူငယ်ချင်းလို့ပဲဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - စိမ်းနေဦးမည့် ကျွန်တော့်မြေ
မောင်နေဝင်း - ရေရိုင်း မြေရိုင်း
မောင်သိန်းဆိုင် - ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီး
ဝင်းဦး - မိန်းမလှအမုန်း
နိုင်ဝင်းဆွေ - မသိန်းရှင်ဆီပို့ပေးပါ
မြသန်းတင့် - ဓါးတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်
ကြည်အေး - မောင် ကိုကိုနှင့် မြနန္ဒာ
မောင်ဝဏ္ဏ ပန်းတွေနဲ့ ဝေ
မြသန်းတင့် - မာယာဘုံ
တက္ကသိုလ်မြစိမ်း - နောက်တိုး
မိုးမိုး(အင်းလျား) - ရွှေတိဂုံကိုမြင်လျှင်
မောင်လွန်းကြင် - သိင်္ဂါရ ရသ
ဂျူး- အမှတ်တရ
နုနုရည်(အင်းဝ) - ပြုံး၍လည်းကန်တော်ခံတော်မူပါ ရယ်၍လည်းကန်တော့ခံတော်မူပါ
မင်းလူ - ရင်ထဲက ဆောင်းရာသီ
တာရာမင်းဝေ - ရွှေဖိနပ်မှာ အစိမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ ကောင်မလေး
ဝင်းဝင်းလတ် - အချစ်၏နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာ
ဇော်ဇော်အောင် - ဝေဝေရီရီဝတ္တု
လင်းယုန်သစ်လွင် - ဓမ္မဝိလာသ
သုမောင်-ချစ် ချစ် ချစ် ၁-၂-၃
ဒါဆိုရင်တော့Shwe Mee Eain
Shwe Mee Eain Myanmar Books
Aung Thar Kyaw
2 years ago in #myanmar by aungtharkyaw (50)
theinzawlin (51)2years ago
aungkhant (50)2years ago
ကျေးဇူး ရှာရတာ လွယိသွားp
kolinn (54)2years ago
စာအုပ်စာပေ လူမိတ်ဆွေ အရမ်းကောင်းပါတယ် အောင်မြင်ပါစေခင်ဗျာ